လွန်ခဲ့တဲ့ ၈ နှစ်က ကွယ်လွန်သွားခဲ့တဲ့ နိုင်ငံကျော် သမိုင်းသုတေသီ ဒေါက်တာသန်းထွန်းရဲ့ အသက် ၉၀ ပြည့် အထိမ်းအမှတ် စာတမ်းဖတ်ပွဲကို ရန်ကုန်မြို့၊ တာမွေမြို့နယ် ဖိုးစိန်လမ်းက စားသောက်ဆိုင် တစ်ဆိုင်မှာ ဒီကနေ့က ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။
ဒီစာတမ်းဖတ်ပွဲမှာ ထင်ရှားတဲ့ မြန်မာစာပေညာရှင်တွေက စာတမ်းတွေ ဖတ်ကြားခဲ့ကြပြီး အဲဒီစာတမ်းတွေကို အများပြည်သူသိရှိအောင် ဖြန့်ဝေသွားမယ်လို့ ဒီပွဲစီစဉ်သူတွေက ပြောပါတယ်။
ဆရာကြီး ဒေါက်တာသန်းထွန်းဟာ သမိုင်းပညာရှင်အဖြစ် လူသိများပေမယ့် မြန်မာစာပေကိုလည်း လေးလေးနက်နက် လေ့လာခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကို စာတမ်းဖတ်ခဲ့သူတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ အငြိမ်းစား မြန်မာစာပါမောက္ခ ဒေါက်တာခင်အေး (မောင်ခင်မင်-ဓနုဖြူ)က ပြောပါတယ်။
ဒီကနေ့ကျင်းပတဲ့ ဆရာကြီး ဒေါက်တာ သန်းထွန်း အောက်မေ့တဲ့ အခမ်းအနားမှာ မြန်မာနိုင်ငံတက္ကသိုလ်အသီးသီးက ပါမောက္ခ၊ ကထိက၊ ညွှန်ကြားရေးမှုးချုပ်တွေဖြစ်ကြတဲ့ ဒေါက်တာခင်လှ ဟန်၊ ဦးစိုင်းခမ်းမှိုင်း၊ ဒေါက်တာခင်အေး(မောင်ခင်မင်-ဓနုဖြူ)၊ ဦးနီတွက်၊ ဦးအံ့ကျော်၊ ဦးစိန်မြင့်၊ ဒေါက်တာစံရွှေ၊ ဒေါက်တာကျော်ဝင်း၊ ဒေါက်တာတိုးလှတို့က မြန်မာ့သမိုင်းဆိုင်ရာ သုတေသန လေ့လာစမ်းစစ်ချက်တွေကို ဖတ်ကြားခဲ့ကြပါတယ်။
သမိုင်းသုတေသီ ဒေါက်တာသန်းထွန်းဟာ မကွယ်လွန်ခင် သူ့ရဲ့အသက် ၆၀၊ ၇၅ နဲ့ ၈၀ ပြည့် နှစ်တွေမှာတုန်းကလည်း ခုလိုစာတမ်းဖတ်ပွဲတွေလုပ်ခဲ့ပြီး စာအုပ်ထုတ်ဝေခဲ့တဲ့ အစဉ်အလာရှိခဲ့ပါတယ်။
ဆရာကြီးကို ဂုဏ်ပြုတဲ့အနေနဲ့ အခု အသက် ၉၀ မြောက်ပွဲမှာ တင်သွင်းခဲ့တဲ့ စာတမ်းတွေကို စာအုပ်အဖြစ် ဆရာကြီးကွယ်လွန်ခဲ့တဲ့ ၈ နှစ်မြောက် အထိမ်းအမှတ်အနေနဲ့ လာမယ့် နိုဝင်ဘာလမှာ ထုတ်ဝေမယ်လို့ သိရပါတယ်။
နေရပ်- Mandalay University) (
Dr. Than Tun is one of the leaders of the All Burma Student Union like U Aung San ,U Nu, U Ba Swe, U Kyaw Nyein, U Rashid, Thuriya U Than Maung, Myoma U Than Kywe, Dr. Maung Maung Kyaw, U Sein Hla, U Yan Way, etc. We, Burmese are very respect Sayagyi Dr. U Than Tun and his colleagues for Burmese independent. They all are Nationalists of Burma.
Apr 10, 2013 06:17 AM